. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကိုယ်စစ်
မနက်က ပီအမ်ရေးထားတဲ့စာကို ဖတ်လိုက်မိတယ် .. ပြီးတော့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ မြင်နေ တွေ့နေ ကြားနေရတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မိပြီး အခုစာကို ရေးဖြစ်သွားတယ် ..
ကျမဘ၀တလျှောက်လုံး မွေးဖွားကြီးပြင်းပုံက အထွေအထူးမရှိပါဘူး .. သာမန်မိသားစုတစုကပဲ ပေါက်ပွားလာတာပါ .. ဦးလေး အဒေါ်တွေက ၀န်ထမ်းတွေများပါတယ် .. အမေကိုယ်တိုင်လည်း ၀န်ထမ်းပါပဲ .. ပြီးတော့ ဦးလေး အဒေါ်တွေက လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေနဲ့ တိုက်မှာ အပေါ်ထပ် အောက်ထပ်နေပါတယ် .. ဒီတော့ နေရထိုင်ရ နည်းနည်းကြပ်တယ်ဆိုပါတော့ .. လွတ်လွတ်လပ်လပ် သိပ်မနေရဘူး .. သူ့အရွယ်နဲ့ သူတော့ ပေးသင့်တဲ့ လွတ်လပ်မှုမျိုးတော့ ပေးပါတယ် .. ဒါက ခုမှ နားလည်လာတာပါ .. ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ စိတ်ဆိုးဘူးတယ် .. သူများတွေလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် မနေရလို့ ..
ကျမအသက်က အခု ၂၄ ထဲမှာ .. အခုချိန်ထိ မိသားစုနဲ့ မဟုတ်ပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ချည်းပဲ ထွက်တဲ့ ခရီး ၂ခါပဲ သွားဖူးတယ် .. အရင်နှစ်က ဒီဇင်ဘာမှာ ကျိုက်ထီးရိုးတခါတက်ပြီး .. အခုနှစ် တခေါက်ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက တခါ ကျိုက်ထီးရိုးတက်တယ် .. ဒါပဲသွားဖူးပါတယ် .. ဒါတောင်မှ ခရီးတိုလို့ပါ .. အင်း .. ရီစရာတော့ဖြစ်နေမလားပဲ .. အသက်က ၂၄ နှစ် အခုလောလောဆည်လည်း သူများနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ် .. ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းခရီးထွက်တာ လိုက်ကန့်သတ်တဲ့မိဘတွေကို တချို့ကတော့ ပိုတယ်လို့ ထင်ကြမယ် .. ဒါပေမယ့် မိဘက မိဘပဲလေ .. မတတ်သာလို့သာ (တနည်း) ရှေ့ရေးအတွက်မို့သာ သူများနိုင်ငံ မလွှတ်ချင်ပဲ လွှတ်လိုက်ရပေမယ့် မျက်စိအောက်ကတော့ အပျောက်မခံချင်ကြတာ မိဘရဲ့ စိတ်ပဲဆိုတာ တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတယ် ..
သားသမီးတွေကို အဝေးမှာထားရလို့ မိဘတွေ အချိန်ပြည့်စိတ်ပူနေမယ်ဆိုတာ သားသမီးတွေအနေနဲ့ သိဖို့ကောင်းတယ် .. မိဝေးဘဝေးမို့ မျက်ကွယ်ရာပဲဆိုပြီး နေချင်သလိုနေတာ .. မသိနိုင်ဘူးထင်ပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်တာတွေက တကယ်တော့ ဘယ်သူ့ကို ထိခိုက်တာလဲ .. သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် ကာယကံရှင်က အထိခိုက်ဆုံးပါ .. သွယ်ဝိုက်ပြီး ထိခိုက်သူတွေကတော့ မိဘနဲ့ ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းပဲပေါ့ ..
အမေက ပြောဘူးတယ် .. ယောကျားလေးတယောက် ကိုယ့်ကိုချဉ်းကပ်တာခံရပြီဆို ကိုယ့်ကိုယ်အရင်ပြန်ဆန်းစစ်ပါတဲ့ .. ဘာကြောင့် ချဉ်းကပ်သလဲ .. အလွယ်ရမယ်ထင်လို့လား .. တကယ်မြတ်နိုးလို့လား ..
လမ်းဘေးထိုင်ပြီး ပါးစပ်သရမ်းတဲ့လူမျိုးကို ကျမအထင်မကြီးတတ်ပါဘူး .. အဲဒါလည်း မိန်းကလေးတယောက်ကို စော်ကားနည်းတမျိုးပါပဲ .. ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာလည်းနှစ်ဖက်ကြည့်ရပါမယ် .. သူဘာလို့ ကိုယ့်ကိုဒီလိုဆက်ဆံလဲ .. ကိုယ့်အနေအထိုင်အပြောအဆိုက စချင်စရာဖြစ်လို့လား .. ဒီလိုဆို သူတို့ကို အပြစ်ပြောလို့မရပါဘူး .. ကိုယ့်အပြစ်ပါ .. သူများစ စရာဖြစ်အောင် နေမိတာကိုး .. ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ မိန်းမမြင်သမျှလိုက်စနေတဲ့လူဆိုရင်တော့ တော်တော်အထင်သေးစရာကောင်းပါတယ် ..
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ နေခိုင်ခွင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ နေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာတွေ သိန်းဂဏန်းရှိပါတယ် .. ဒီထဲမှာ ကောင်းတဲ့လူရော မကောင်းတဲ့လူပါ ပါပါတယ် .. တချို့လည်း မြန်မာအချင်းချင်း အမြတ်ထုတ်တဲ့လူတွေလည်းတွေ့ရပါတယ် .. တချို့လည်း ပါးစပ်နဲ့ပဲ အသားယူလိုက်ရ ယူလိုက်ရဆိုတာမျိုးလည်း မြင်ဘူးပါတယ် .. တကယ်ဆို ကိုယ်လည်း မြန်မာ သူလည်းမြန်မာ .. ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ လုပ်ကိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းမရှိလို့ သူများနိုင်ငံလာပြီး ဒုက္ခခံရတာပါ .. ဒါတွေကို ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားဘူးမှာပါ .. ကိုယ်တွေ့အသိရှိရက်နဲ့ အကူအညီမပေးနိုင်ရင်တောင် စော်ကားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး .. တတ်နိုင်သလောက် ကာကွယ်ပေးသင့်ပါတယ် ..
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့လည်း လူတဖက်သားက ကိုယ့်ကို အထင်သေးစေမယ့် အပြုအမူအပြောအဆိုမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ် .. သူများကိုပဲ အပြစ်ပြောပြီး ကိုယ့်မျက်ချီးကိုယ်မမြင်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး .. လက်ခုပ်ဆိုတာနှစ်ဖက်တီးမှမြည်တာပါ .. ကိုယ်က စိတ်လိုလက်ရ လိုက်တီးပြီးမှ အပြစ်ကို သူများပုံချတာလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး .. ကိုယ်ဟာ မြန်မာမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာမိန်းကလေးအားလုံးအပေါ် ကိုယ်စားပြုပါတယ် .. ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကြောင့် မြန်မာမိန်းကလေးတွေအကုန်လုံး အထင်အမြင်သေးခံရနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အတွေးလေးကို ခေါင်းထဲထည့်ထားပြီး ကိုယ့်လုပ်ရပ် ကိုယ်ပြန်စစ်ကြရအောင် ..
မှတ်ချက် = စိတ်ထဲရှိသလို ချရေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ..
ရေးသားသူ moekhar at 3/26/2009 03:59:00 PM